अस्पतालमा बेड अभाव, होम आइसोलेसनमा संक्रमितको ज्यान जाँदै « Naya Page
अस्पतालमा बेड अभाव, होम आइसोलेसनमा संक्रमितको ज्यान जाँदै
सुनसरी, ४ कार्तिक । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका– १६ का ४९ वर्षीय एक शिक्षकको गत बुधबार राति होम आइसोलेसनमै मृत्यु भयो । परिवारका सदस्यले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेड सोध्दा सोध्दै उनको ज्यान गएको हो ।
बुधबार राति नै धरान– ९ का ५८ वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भयो । प्रतिष्ठानमा अक्सिजन बेड खाली नभएपछि अक्सिजन सिलिन्डर किनेर उनलाई घरमै राखिएको थियो । तर, स्वास्थ्य थप खराब भएपछि राति ११ बजे अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै उनको ज्यान गएको वडाध्यक्ष रत्न कटवालले बताए ।
त्यसअघि, गत सोमबार धरान– २ का ८९ वर्षीय पुरुषको होम आइसोलेसनमै मृत्यु भएको थियो । अस्पतालमा भेन्टिलेटर अभाव भएपछि परिवारले उनलाई घरमै राखेको थियो । एक साताअघि धरान– ८ का ५२ वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गयो । निमोनियाका कारण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका उनको प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा भेन्टिलेटर अभाव हुँदा ज्यान गएको थियो ।
यसरी पछिल्ला दिन उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनको संख्या बढ्दै गएको छ । धरानमा मात्र अस्पताल जान नपाई पाँच जनाको मृत्यु भएको धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताए । बिपी प्रतिष्ठानको तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमणबाट ५८ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा मृत्यु हुनेको संख्या एक सय २२ पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले २ जेठमा हजार शैंयाको आइसोलेसन वार्ड बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । यति मात्र होइन, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैंयाको आइसोलेसनसहितकोे अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
पछिल्ला दिन बिरामीको चाप बढिरहेको छ । धरानको बिपी प्रतिष्ठान प्रशासनले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने भन्दै समन्वय गरेर मात्र बिरामी ल्याउन सूचना नै जारी गरेको छ । अस्पतालले धान्न नसकेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले स्थानीय तहहरूलाई लकडाउन गर्नसमेत सुझाब दिएको छ ।
पिसिआर परीक्षणको दायरा घटाइएको भए पनि संक्रमितको दर भने बढेर गएको छ । दसैँका लागि किनमेल गर्नेले स्वास्थ्य प्रोटोकल बेवास्ता गर्दै भिडभाडयुक्त ठाउँमा जाने क्रम बढेकाले स्थिति अझ भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्न् । तर, नागरिकदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले चासो दिएका छैनन् ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहले लक्षणसहितका बिरामी बढ्दो क्रममा रहेको र मृत्यु संख्यासमेत बढेकाले आगामी दिन थप सतर्कता आवश्यक रहेको बताए । ‘अबको अवस्थामा धेरै संक्रमितको भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु हुने सम्भावना बढेको छ । प्रतिष्ठानमा भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ । तर, स्रोत–साधनको अभाव छ,’ प्रा.डा. साहले भने ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रतिष्ठानमा १० वटा भेन्टिलेटर राखिएको थियो । तर, ६ वटाले जडानकै समयमा काम नदिएपछि बनाउनका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई फिर्ता गरिएको थियो । तर, ती बनेर आएका छैनन् । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले पनि पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमित र कोरोनाबाट हुने मृत्युदर बढेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
अमेरिकामा झन बढ्यो कोरोना, एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु
डा. भट्टराईको प्रश्न : पार्टी विवादमा राष्ट्रपतिकहाँ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा संविधानको कुन धारामा छ ?
काठमाडौं, १९ मंसिर । केही दिनयता अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीब्र बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय
काठमाडौं, १९ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी विवादका